रु. १० ले घट्यो पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर - सिधा मिडिया
रु. १० ले घट्यो पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर
१८ जेष्ठ २०७९, बुधबार १०:५० मा प्रकाशित
593 जनाले पढ़िसके
काठमाण्डौ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ।
सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लिटरमा १०/१० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय कार्यालय गर्न अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई मंगलबार पठाइसकेको छ।
पूर्वाधार कर घटेसँगै अब पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाउने वा निगमको घाटा घटाउने निर्णय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
डिजेल र पेट्रोलमा लगाइएको पूर्वाधार कर घटेसँगै मूल्य पनि समायोजना हुनेछ ।
काठमाण्डौ । अबको एक साताभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्ने भएको छ।
गत सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अबको एक साताभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्ने जानकारी गराएका थिए। यसका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाउने तयारी भइरहेको उनले बताएका थिए।
अहिले पेट्रोल लिटरको १८० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल लिटरको १६३ रुपैयाँ छ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले भाउ घटाएमा प्रतिलिटर पेट्रोल लिटरको १७० रुपैयाँ र डिजेलको १५३ रुपैयाँ कायम हुनेछ।